Imbali yeNtengiso | Martech Zone
NgoMvulo, nge-9 kaJanuwari, 2012 NgeCawa, nge-8 kaJanuwari 2012 Douglas Karr
Isifaniso ndihlala ndisisebenzisa kwiinkampani xa zibuza ukuba yintoni umahluko phakathi intengiso kunye nentengiso ukuloba. Ukwenza intengiso kum kukuncamathisela intshulube ekupheleni kokuloba ndize ndiyixhome phambi kwentlanzi, ngethemba lokuba bayaluma. Ukuthengisa sisicwangciso esindikhokelele edikeni, uhlobo lwesikhephe, ukuwisa, intonga, isondo, umgca, ihhuku, isithiyelo, ixesha losuku kunye nohlobo lweentlanzi endizama ukuzibamba … Nokuba zingaphi na. Intengiso sisiganeko, ukuthengisa sisicwangciso-qhinga (esihlala sibandakanya intengiso).
Ngaba uyazi ukuba isibhengezo sokuqala senziwe eNgilane, kwaye sasenzelwe incwadi yemithandazo? Okanye ukuba intengiso yokuqala kamabonakude yayise-1941 yeewotshi zeBulova? Ukubheja bekungazi ukuba igama lentengiso eliyigama lokuqala "yayiyigalufa"! Indaleko yentengiso iye yafumana amanqanaba abalulekileyo afana nomatshini wokushicilela kunye nomabonwakude onefuthe kakhulu kwifomathi yentengiso. Nangona kunjalo, i-intanethi iguqule intengiso mhlawumbi yeyona nto, kwaye sikholelwa ukuba intengiso ye-In-Text sisizukulwana esilandelayo sentengiso. Ke kubalulekile ukuba uphonononge apho intengiso iqale khona ukuze siqonde ngcono ukuba sijongise phi!
Intengiso ibikho ixesha elide… enyanisweni, inde kakhulu kunangaphambili infographic nge Infolinks:
tags: intengisoimbali yentengisoimbali yentengiso
Imfihlelo yokweba Iziphumo zeNjini yokuKhangela
Iingcebiso ezi-4 zokwenza ngcono "ukuHlala"
Jan 10, 2012 ngo-3: 13 PM
Ndicinga ukuba i-Dentifrice Tooth Gel isenokuba phambili kumaxesha ngo-1661. Ngaphandle koko, olu luluhlu olukhulu- kwaye kumnandi kakhulu!
Jan 16, 2012 kwi-4: 58 AM
Lowo ngumzobo omangalisayo, andinakufanekisela ukuba ifayile yayijongeka njani kwiFotohop! Imbali yentengiso ngenene iyimbali yorhwebo, unxibelelwano kunye nokutshintshiselana ngemali. Kum, ishishini lentengiso laqala eMadison Avenue NYV kwangoko kwi-20c xa iiarhente zaqala ukuvela, ukudibanisa ubugcisa, imithombo yeendaba ngobuninzi kunye neengqondo zabathengi. Bhere yincwadi emangalisayo endiyibize ngoLwazi ngeNdlu entle nguDavid McCandless: http://www.informationisbeautiful.net/ kufuneka ufunde kwimizobo yolwazi, unyanzelisa imida….
Epreli 12, 2012 ngo-6: 08 AM
Imifanekiso emihle kakhulu! Ukubuyela umva kwindawo yokuqala yentengiso. Iyahlekisa kwaye iyafundisa.